5 Talooyin Top Waayo Brisbane By tareenka | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > 5 Talooyin Top Waayo Brisbane By tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 24/03/2020)
Brisbane waa caasimada Queensland iyo waxaa barakeeya A-liiska soo jiidashada sida Badda World, ee cagaarka u wanaagsan oo Jannada South Bank, iyo Story Bridge iyo dad badan oo dheeraad ah - Australia ugu dheer buundada cantilever.
Sidoo kale magaalo hal abuur leh, la tahay matxafyada iyo galleries iyo kafateeriyada dhimatay aplenty, oo lagu daray waxa ay goobtii ugu fiican ee xeebaha Gold Coast, badda, iyo isticmaalo.
Haddii aad tahay qayb ahaan si ay u tababaraan safarka, nidaamka tareenka ayaa nuxur u ah magaalada ee kaabayaasha gaadiidka iyo dhaqanka taariikhda.
Sidaas darteed haddii aad rabto inaad aragto Brisbane tareen, halkan shan talooyin top.
Waxay ku taallaa on the line North Coast, Station Central waa magaalo network ee saldhiga ugu weyn oo waxaa ku sugnaa bang qalbiga xarunta dhexe ee ganacsiga ee Brisbane.
Furay ka dib 1889, ay dhayal classic jeedaa Anzac Square, waana halbowlaha ugu weyn ee wadooyinka u adeegaya Queensland iyo inta kale ee Australia.
Haddii aad jeceshahay hoygeeda dhow, Oaks Charlotte Towers Hotel waa qaado heer sare ah - ma ahan qaali iyo shidmaan baydhno iska eafiya iskana skyline magaalada.
ma Brisbane Metro weli waa hawl - laakiin nidaamka gaadiidka degdeg ah mass si buuxda u maal-, dhismaha bilaabo in dadaalka sannadkan waana in la furo dadweynaha by 2023.
at 21 kiiloomitir dheer, Ma u adeegi doonaa 18 saldhigyada magaalada oo dhan iyo dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha si isku mid ah ay awoodaan in ay on iyo sida ay raalli ka bood noqon doonaa.
Waxaa aad ujecel A $ 944 million, laakiin dheefaha waxaa ka mid ciriiriga la dhimay iyo cadaadiska ka yar basaska bedelay Brisbane ee.
Uumi Tareen Sunday
Haddii aad rabto in qaraxa uu ka dhaafay (siyaabo ka badan hal), madaxa si Brisbane ee Roma Station Street for caadiga ah Uumi dhacdo in Tareenku Sunday.
Tallaabada gudaha gaadhifardood alwaax genteel iyo in aad isla markiiba la laaban doonaa gaadiid in marxalad dheeraad ah qatarsanaa, sida adiga iyo chug qoyska ay weheliyaan ee la soo dhaafay Brisbane ee ugu muuqaal dabiici ah meelaha.
Waa xiiso leh da 'kasta, laakiin kids iyo dadka waayeelka ah waxaa si gaar ah u la dhacsan by qardhaasaha ay.
Rail Museum Seminaarada The
Ipswich yaalo koonfurta-galbeed ee goobta Brisbane iyo nawaaxigeeda, waana meesha aad ka heli doontaa Seminaarada Rail Museum yaabka.
Waa waayo-aragnimo ah oo dhaxalkaygiina interactive iyo adkaa galiyey workshops tareenka ugu da'da weyn Australia iyo waxaa ka buuxa tareen uumi dhif, mishiinada warshadaha weyn, iyo bandhigaa multi-warbaahinta.
Marka aad rabto in aad dalxiiska waxbarasho iyo raaxo u leh qoyska oo dhan, eegi jirin dheeraad ah.
Brisbane garoonka waa xarun mashquul gaadiidka in uu ka farxiyay soo makhaayadaha sida Fonzie Abbot, baararka sida Transit Tavern iyo bixiyayaasha la dhigto sida Looking4.com.
Laakiin adventurers badan oo timaado by hawada, waxa ugu fiican ee ku saabsan waa AirTrain, ah 13 tareenada rakaabka kilomitir in la dheereeyaa spiriting safra garoonka si Central Station tan 2001.
Ka dib markii diyaarad daalo, AirTrain aad xanbaarsan yahay in bartamaha magaalada kaliya 20 daqiiqo - quruxsan cajiib ah.
Raac shan talooyin our waayo dulmarka Brisbane tareen oo aad joogi doonaa on track for fiican a fasaxa.
Ma leedahay talooyin safarka tareenka Brisbane? iyaga wadaag qaybta comments iyo haddii aad u baahan tahay tareen badbaadi tareen A.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-brisbane-train/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Brisbane #xarkaha tareenka australia Brisbane tareen talooyin tareenka
Taleefanka gacanta Robbie
Robbie Handy wuxuu ka soo jeedaa Fife ee Scotland wuxuuna aad u xiiseynayay tareenada tan iyo markii ugu horeysay ee uu arkay iyagoo ku dul wareegaya The Forth Bridge - mid ka mid ah mucjisooyinka injineernimada adduunka. Marka laga reebo tareenada, gaadiidka, iyo safarka, wuxuu jecel yahay inuu wax ka qoro farshaxanka, dhaqanka, iyo siyaasada oo ingiriis ah, Iskotishka, iyo Jamaican Patois. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir